QORMO: WAXQABADKII MADAXWEYNIHII QARNIGA SOOMAALIYEED MUDANE HASSAN SHEIKH MOHAMUD | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA QORMO: WAXQABADKII MADAXWEYNIHII QARNIGA SOOMAALIYEED MUDANE HASSAN SHEIKH MOHAMUD
Mundane Hassan Sheikh waxuu ka mid ahaa madaxdii dalka soo martay midkii ugu wanaagsanaa waxuu ahaa nin ay udhamays tirantahay astaamaha lagu garto hogaamiyaha wanaagsan waxuu lahaa aqoon iyo waayo aragnimo dhamaystiran ee looga bahan yahay hogaamiye waxuu ahaa nin ka dhisan dhinaca maadiga iyo diiniyan intaba ma ahayn cilmaani.
Mudane Hassan dalka iyo dadka soomaliyedba weey tabeen ,shaqadii uu qabatay iyo guulihii uugaaray maahan mid qoraal yar lagu soo koobikaro.
Dalka waxuu soo gaarsisay meel sare aan cidna maantay dafiri Karin guuxa Shacabka somaliyed waxa uu noqdo ilaahow Hassan oo nabad qabo noo soo celi dalka iyo dadkuba ilaahay kasakoow qof aanan adiga ahayn uma maqno.
Xiligii aad talada dalka haysay waxan hiigsanaynay meel sare waxan lahayn rajada ay leeyihiin shacbkasta ee dunidan kunool, mudadii yarayd aad dalka haysay iftiin dowladnimo Ayaan arkeynay.
Dhamaan waxa uu dhisay kaabayashii dhaqaalaha sida wadooyinka, garoomada diyaarada, dakada, cisbitaalo IWM.
Wadooyinkii uu dhisay waxaa kamid ah Maka Almukara, Wadnaha, wadada Sodonka ay howshedu gabo gabo ahayd.
Garoonka diyaaradaha ee Adan Ade International airport ayuu dhisay kana dhigay garoon caalami ah, waxuu kaloo door muhiim ah ka ciyaaray dhisidii garoonka Bosaaso, Dakada Mogadishu sidoo kale dib ayuu udhisay.
Cisbitaalo badan ayuu dalka ka hirgaliyay waxuu dib udhisay cisbitaalkii Digfeer dadka somaliyed waxey cafimad uradsan jireen dalka dibadiisa wuu daboolay baahidas manatay qofkasta oo somaliyed dalka gudihiisa ayu cafimadka uu rabo ka heliyaa ilaah ayaa baxshee cafimadka.
Waxuu dib udhisay xafiisyadii ay dowladu kushaqayn lahayd.
Waxuu ladagaalamay musuq maasuqa.
Waxuu shaqo abuur usameyay dhalinyarada, maantay hadad gasho xafisyada dowlada waxaa fadhiyo dhalinyaro.
Waxbarashada horumar lataaban karo ayuu dalku gaaray intuu uu talada hayay waxa kamid ah manaahijtii waxbarasha oo lamideyay in imtixanadka sidoo kale ayadana lamideyay dalka oo dhan hal imtixan laga qadayay Ardayda Somaliyed meelkasta oo ay dalka ka joogan.
Waxay uu dalka ka hirgaliyay barnaamijkii ahaa aada dugsiyada oo loogu talo galay in ay waxbarasho lacag la’aan ah ku helaan caruurta Soomaliyeed ee agoomaha ah iyo kuwa waalidkood aanu awood u laheyn inuu ka bixiyo qarashaad ay wax ku bartaan.
Waxuu dib udhis kusameyay jaamacadii umada Soomaliyeed.
Waxuu soo celiyay sharaftii iyo karaamadii aan aduunka intiisa kale ku lahayn, xiriirkii arimaha dibadana wuu dhisay.
Waxaa dalka lagu qabtay shirar heer caalami ah sida shirkii 53aad ee wasiirrada arrimaha dibedda ee wadammada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD mudo sodon sano kadib ah, waxaa kaloo magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ay marti-gelisay Shir Madaxeedkii Urur gobaleedka IGAD oo isagu markii ugu horeysay lagu qabto gudaha Soomaaliya tan intii la dhisay 1986.
Mid aan qofkasta oo muwadin Soomliyed ah uusan ilaabi Karin ayaa ah kiiskii Bada ee udhaxeyay dowladaha Somaliya iyo Kenya ayuu door muhiim ah ka ciyaaray hadaladisii waxaa kamid ahaa ‘‘gorgotan kama galayno mitir dulkeena kamid ah kamana tanasulayno’’waxa uu qaatay go,aan geesinimo leh.
Visaha dal kugalka kenya oo shacabka somaliyeed ku dhibaatesnayeen ayuu fududeeyay.
Dowlada Somaliya waa dowad federal ah federalkuna waa in dalku uu leyahay maamul goboleed waxuu dhisay maamulo badan asagoo tixracayo dastuurka dalka u dagsan, waxaa kamid ah maamulada uu dhisay Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeele waxuu dhamaystiray maamulka Jubbaland oo ahaa qabyo dhisidiisii.
Qorshahu waxuu ahaa inuu dalka ka hiragaliyo doorasho qof iyo cod ah lakin waqtiga oo yaraa ma suurto galin balse wax udhaw ayuu sameyay oo ah in halkii xildhibaan ay doorato 51 xubnood, waxuu kaloo dhisay aqalka sare oo aan dowladihii ka horeyay ayna usuurto galin ineey dhisaan.
Madaxweyna kasta marka ladoorto imtixankisa ugu horeyo wax weeye xulasha ra’isul wisaare iyo xukumad tayo leh si uu u noqdo mid ku guuleystay imtixankisii ugu horeyay.
Mudane Hassan Sheikh wuxuu ku guleeysta imtixankisii kowad waxuu dhisay xukumad yar tayona leh aanan kusaleys nayn 4.5 xukumadas waxaa ra’isul wasaare ka ahaa Mudane Saacid Shirdoon xukumadaas waxey ka koobneyd 10 wasiiro waxana loo qeybiyay si isku mid ah qolo kaste waxa ay heshay labo wasiir sida Digil iyo Mirifle 2 wasiir, Hawiye 2 wasiir, Darood 2 wasiir, beelaha laga tirade badan yahayna 2 wasiiro bal fiiriya meesha uu cadaalad ka garay cimrigisa alaha raajiyee.
Dhalinyarada waxa uu utusay ineey yihiin hogamiyayashii bari hadan tusaale usoo qaato dhismihii gudoomiyayasha gobolka banaadir wax uu kadhigay dhalinyaro ah fresh graduate dhamaan degmooyinla gobolka banaadir ayuu dhalinyaro gudomiyayaal ooga dhigay si ay barito ula wareegan xukunka dalka.
Waxuu wado hadal kula jiray maamulka Somaliland dhawr marna ay kulmeen natiijo miro dhal ahna ka keenay.
Waxaa kaloo uu si joogto ah ulaxisabtami jiray dhamaan haydaha Dowlada.
Amniga guul weyn ayuu kagaaray waxa uu dhisay dhamaan laamaha Aamaanka, waxuu dhisay ciidamado wax tar leh agab kooduna udhamays tiran yahay hadaan tusaale usoo qaato ciidamadii uudhisay waxaa ka mid ah Danab waxuu dib udhis kusameyay Alpha group.
Amniga dalka aad ayuu uwanagsanaa xiligii ay dani kasoo gasho magaalada ayaad dantada ubaxaysay adigoon cabsi amni daro qabin.
Waxaa lagu guuleystay sugida amniga shirarkii heerka caalami ee dalka lagu qabtay sida shirkii wasiirada arimaha dibada iyo madaxda dowladaha xubinta ka ah urur goboledka IGAD si nabad ah ayuuna kusoo gabo gaboobay.
Waxaa kaloo laamaha aminigu ku guuleysteen sugida amniga doorashadii dalka kadhacday iyo xafladii caleemo saarka madaxaweynaha hada talada dalka hayo.
#Qore Abdirashid Mohamed Hussein(Awrjan )